Bartlett Lauds Bahia Principe သည် ပထမဆုံး Jamaican Country Manager အသစ်ဖြစ်သည်။
ပင်မစာမျက်နှာ » နောက်ဆုံးရဆောင်းပါးများ » နိုင်ငံတကာသတင်းများ » ဂျမေကာသတင်းထူးများ » Bartlett Lauds Bahia Principe သည် ပထမဆုံး Jamaican Country Manager အသစ်ဖြစ်သည်။
နိုင်ငံတကာသတင်းများ • Breaking ခရီးသွားသတင်းများ • ကာရစ်ဘီယံ • အစိုးရသတင်းများ • ဧည့်ဝတ်ပြုခြင်းစက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များ • ဂျမေကာသတင်းထူးများ • သတင်း • ခရီးသွားလုပ်ငန်း • ခရီးသွား Destination Update ကို • Travel ကြေးနန်းသတင်းများ
ခရီးသွားလာရေးဝန်ကြီး Hon. Edmund Bartlett သည် Bahia Principe ၏ Jamaican Country Manager အသစ် Brian Sang (ညာ) နှင့် ၎င်းတို့၏ Chief Operating Officer Antonio Teijeiro တို့ကို နှုတ်ဆက်သည်။ အဆိုပါ occaison သည် ဇန်နဝါရီ 11 ရက်၊ 2022 ရက်နေ့တွင် Minister's New Kingston ရုံးများတွင် Bahia Principe ၏ စီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့မှ စီမံခန့်ခွဲမှုမှ ဂါရဝပြုခြင်းဖြစ်သည်။ Jamaica ခရီးသွားလာရေးဌာန၏ ရုပ်ပုံအား လေးစားစွာဖြင့်
ဂျမေကာ၏အကြီးဆုံးဟိုတယ် Bahia Principe သည် Brian Sang အား ၎င်း၏ပထမဆုံး Jamaican Country Manager အဖြစ်ခန့်အပ်ကြောင်းကြေငြာခဲ့သည်။ အဆိုပါသတင်းကို ခရီးသွားလာရေးဝန်ကြီး ဦးဟန်လင်းက ကြိုဆိုခဲ့သည်။ ကြေငြာချက်သည် ကဏ္ဍအတွင်း ခေါင်းဆောင်မှုအခန်းကဏ္ဍများတွင် ဂျမေကန်လူမျိုးများ ပိုမိုရရှိရေးသည် ၎င်း၏ ဝန်ကြီးဌာန၏ ရည်မှန်းချက်နှင့်အညီဖြစ်ကြောင်း Edmund Bartlett မှ မှတ်ချက်ပြုခဲ့သည်။
"Bahia သည် ဂျမေကန်နိုင်ငံသားတစ်ဦးအား ၎င်းတို့၏ Country Manager အသစ်အဖြစ် ခန့်အပ်ကြောင်းသိရှိရသည့်အတွက် အလွန်ဝမ်းသာမိပါသည်။ ဤသည်မှာ ကဏ္ဍအတွင်း ဂျမေကန်လူမျိုးများကို တတ်နိုင်သမျှ များများစားစား ကဏ္ဍအတွင်း ခေါင်းဆောင်မှုနေရာများတွင် ထားနိုင်စေရန် သေချာစေရန်အတွက် ခရီးသွားလုပ်ငန်း ဝန်ကြီးဌာနတွင် မြှင့်တင်ပေးနေသည့် လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ် တွန်းအားပေးမှု၏ အဓိကကျသော အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ကြောင်း Bartlett မှ ပြောကြားခဲ့သည်။
"ကျွန်တော် မစ္စတာဆန်းကို လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲ ကြိုဆိုပြီး ဂျမေကာမှာ ကုမ္ပဏီရဲ့ 15 နှစ်မြောက်မှာ စတင်မယ့် အောင်မြင်တဲ့ ရာထူးတစ်ခု ရပါစေလို့ ဆုတောင်းပါတယ်" ဟု ၎င်းက ထပ်လောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။
ဝန်ကြီးသည်ယနေ့အစောပိုင်းကသူ၏ New Kingston ရုံးများတွင်အစည်းအဝေးတစ်ခုအတွင်းဤမှတ်ချက်ကိုပြောကြားခဲ့သည်။ ဟိုတယ်မှ အမှုဆောင်အရာရှိများနှင့် ဆွေးနွေးရာတွင် Jamaica Centre of Tourism Innovation (JCTI) မှ ဧည့်ဝတ်ကျေပွန်သည့် ဝန်ထမ်းများအား ကဏ္ဍ၏လိုအပ်ချက်များကို ပိုမိုကောင်းမွန်စွာဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရန် လေ့ကျင့်ပေးလျက်ရှိပြီး ခေါင်းဆောင်မှုအခန်းကဏ္ဍများကို ပိုမိုဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရန်လည်း အရည်အချင်းပြည့်မီသော လုပ်ငန်းများကို အလေးပေးပြောကြားခဲ့ပါသည်။
"ဂျမေကာနိုင်ငံ၏ လူသားအရင်းအနှီးကို တည်ဆောက်ရန် ကျွန်ုပ်တို့၏ ကတိကဝတ်ပြုမှု၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအနေဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် JCTI ဟုခေါ်သော လေ့ကျင့်ရေးလက်ရုံးတစ်ခုကို တီထွင်ခဲ့ပြီး၊ ဧည့်ဝတ်ပြုခြင်းလုပ်ငန်း၏ လုပ်သားအင်အားကို လေ့ကျင့်ခြင်းနှင့် အသိအမှတ်ပြုခြင်းတို့ကို လုပ်ဆောင်နိုင်သည့် အကောင်းဆုံးအလုပ်တစ်ခုဖြစ်ကြောင်း Bartlett မှ ပြောကြားခဲ့သည်။
“ဒါက ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ခရီးသွား လုပ်ငန်းရဲ့ တိုးတက်မှုနဲ့ ယှဉ်ပြိုင်နိုင်စွမ်းအတွက် အရေးကြီးတယ်။
JCTI သည် ခရီးသွားလုပ်ငန်း မြှင့်တင်ရေး ရန်ပုံငွေ (TEF) ၏ ဌာနခွဲတစ်ခုဖြစ်ပြီး ခရီးသွားလာရေး ဝန်ကြီးဌာန၏ အများပိုင်အဖွဲ့ဖြစ်သည်။ လွန်ခဲ့သည့် လေးနှစ်ကတည်းက စတင်လုပ်ဆောင်ခဲ့ရာ ၈,၀၀၀ ကျော်သွားပြီဖြစ်သည်။ ဂျမေကန်ခရီးသွားလုပ်ငန်း အလုပ်သမားများသည် ပရော်ဖက်ရှင်နယ် အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ် ရရှိထားပြီးဖြစ်သည်။ လူသားအလုပ်အကိုင်နှင့် အရင်းအမြစ်လေ့ကျင့်ရေး/အမျိုးသားဝန်ဆောင်မှုလေ့ကျင့်ရေးအေဂျင်စီ Trust (HEART/NSTA Trust)၊ Universal Service Fund (USF)၊ အမျိုးသားစားသောက်ဆိုင်များအသင်း (NRA) နှင့် AHLEI တို့နှင့် မဟာဗျူဟာမြောက် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့် ၎င်းကို ဖြစ်နိုင်ချေရှိသည်။ လက်ရှိတွင် လျှောက်ထားသူ 45 ဦးသည် American Culinary Federation (ACF) မှ ကမ်းလှမ်းထားသော ၎င်းတို့၏ အချက်အပြုတ်အနုပညာ အောင်လက်မှတ်အတွက် ပြင်ဆင်နေပါသည်။
အဆိုပါအစည်းအဝေးသို့ အကြီးတန်းခရီးသွားလုပ်ငန်းအရာရှိများအပြင် Bahia Principe Resort မှ Chief Operating Officer, Antonio Teijeiro အပါအဝင် အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။ Hotel Development and Innovation ၏ အမှုဆောင်ဒါရိုက်တာ Marcus Christiansen; ထွက်သွားသောနိုင်ငံမန်နေဂျာ Adolfo Fernández; နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းနှင့် ကော်ပိုရိတ်လူမှုရေးတာဝန်ယူမှုဆိုင်ရာ ဒါရိုက်တာ Fabian Brown၊ နှင့် အသစ်ခန့်အပ်ထားသော Country Manager, Brian Sang.
Sang သည် ဟိုတယ်၊ ခရီးသွားလုပ်ငန်းနှင့် ဧည့်ဝတ်ကျေပွန်မှု စီမံခန့်ခွဲမှုလုပ်ငန်းများတွင် အောင်မြင်သော ရာထူးသက်တမ်းများနှင့် မှတ်သားဖွယ်ကောင်းသော ခေတ်များနှင့်အတူ Bahia သို့ ချိတ်ဆက်ခဲ့သည်။ သူ၏ လတ်တလောခေါင်းဆောင်မှုအခန်းကဏ္ဍမှာ စိန့်လူစီယာရှိ Blue Diamond Resort အတွက် Cluster အထွေထွေမန်နေဂျာအဖြစ် ဖြစ်သည်။
ထွက်ခွာလာသော ဒါရိုက်တာ Adolfo Fernandez သည် ဇန်နဝါရီ6ရက်၊ 2022 တွင် အဖွဲ့အတွင်း စပိန်တွင် အခန်းကဏ္ဍအသစ်ကို တာဝန်ယူခဲ့သည်။
Bahia Principe Hotels & Resorts သည် ဒိုမီနီကန်သမ္မတနိုင်ငံ မြောက်ပိုင်းကမ်းရိုးတန်းရှိ Rio San Juan တွင် ၎င်း၏ပထမဆုံးဟိုတယ်အဖြစ် 1995 ခုနှစ်တွင် စတင်လည်ပတ်ခဲ့သော Grupo Piñero ၏ အပန်းဖြေစခန်းဌာနခွဲတစ်ခုဖြစ်သည်။ Grupo Piñero ၏ Bahia Principe ဟိုတယ်ဆိုင်ခွဲသည်လည်း မက္ကဆီကိုရှိ Riviera Maya နှင့် Canaries နှင့် Balearic ကျွန်းစုများရှိ စပိန်နှင့် မက္ကဆီကိုနိုင်ငံတို့တွင် အိမ်ရာများရှိသည်။
ဓာတ်ပုံတွင်တွေ့မြင်ရသော ခရီးသွားဝန်ကြီး Hon. Edmund Bartlett သည် Bahia Principe ၏ Jamaican Country Manager အသစ် Brian Sang (ညာ) နှင့် ၎င်းတို့၏ Chief Operating Officer Antonio Teijeiro တို့ကို နှုတ်ဆက်သည်။ အဆိုပါ occaison သည် ဇန်နဝါရီ 11 ရက်၊ 2022 ရက်နေ့တွင် Minister's New Kingston ရုံးများတွင် Bahia Principe ၏ စီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့မှ စီမံခန့်ခွဲမှုမှ ဂါရဝပြုခြင်းဖြစ်သည်။ Jamaica ခရီးသွားလာရေးဌာန၏ ရုပ်ပုံအား လေးစားစွာဖြင့်